ဆေး - ဆေးများ. ဆေး ဆိုသည်မှာ အစားအစာမှ လွဲ၍ ရှုရှိုက်နိုင
ဆေး - ဆေးများ. ဆေး ဆိုသည်မှာ အစားအစာမှ လွဲ၍ ရှုရှိုက်နိုင်သော၊ ထိုးသွင်းနိုင်သော၊ အငွေ့ရှုနိုင်သော၊ စားသုံးနိုင်သော၊ အရေပြားမှတဆင့် စုပ်ယူနိုင်သော၊ သို့မဟုတ် ..
မက ဆ တက ကသ လ အင ဂလ ပ University of Medicine, Magway သည မက တ င ဒ သက မက မ တ င တည ရ သည မက ဆ တက ကသ လ က ခ န စ မ လတ င
ဆ တက ကသ လ မန တလ သည မ န မ ပ ည ရ ဆ တက ကသ လ ခ အနက မန တလ မ တ င ရ သ ဆ တက ကသ လ ဖ စ သည ဆ ပည ဘ MBBS န င ဆ ပည ဆ င ရ ဒ ပလ မ
ဆ တက ကသ လ ရန က န သည ရန က န တ င ဒ သက မ က ဥက ကလ ပမ နယ ခ မ သ လမ တ င တည ရ ပ ရန က န မ တ င မ မ င ခန က ဝ သည ဆ တက ကသ လ
တပ မတ ဆ တက ကသ လ သည ရန က န တ င ဒ သက မင ဂလ ဒ မ နယ ရန က န ပ ည လမ မက န င ခရပင လမ ထ င အမ တ ဃ တ င တည ရ သ စစ ဘက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ
ဆ တက ကသ လ ရန က န သည မ န မ န င င ရ ဆ တက ကသ လ ခ အနက ပထမဦ ဆ တည ထ င ခ သ က င ဖ စ ပ သည မ န မ ပ ည တက ကသ လ ဝင တန စ မ ပ တ င
ဆ ဘက ဆ င ရ နည ပည တက ကသ လ ရန က န သည ရန က န မ ရ အင စ န မ နယ တ င တည ရ သည မ န မ န င င ရ ဆ ဘက ဆ င ရ အဆင မ င ပည က သင က ပ သ
ဆ ဘက ဆ င ရ နည ပည တက ကသ လ မန တလ သည မန တလ တ င ဒ သက ပ သ မ က မ နယ တ င တည ရ သည ယခင အမည ဆ ဘက ပည သည တက ကသ လ မန တလ မ ဆ
တပ မတ သ န ပ န င ဆ ဘက ပည တက ကသ လ သည ရန က န တ င ဒ သက မင ဂလ ဒ မ နယ တ င တည ရ သ စစ ဘက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ သည သ န ပ ဆ င ရ
သ ဘက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ ရန က န သည ရန က န တ င ဒ သက သင ဃန က န မ နယ တ င တည ရ ပ မ န မ န င င ရ သ ဖက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ န စ ခ အနက
သ ဘက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ မန တလ သည မန တလ တ င ဒ သက မန တလ မ ခ မ မ သ စည မ နယ တ င တည ရ သည မ န မ န င င သ ဘက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ
ဆ တက ကသ လ တ င က သည ရ မ ပ ည နယ တ င ပ င တ င က မ တ င တည ရ သည မ န မ န င င ပဉ စမမ က ဆ တက ကသ လ ဖ စ ပ ရ မ ပ ည နယ န င
ဆ ပည ဆ သည မ က သခ င န င ဆ င သ သ ပ ပ ပည သ မက အန ပည တစ မ ဟ လည ခ ဆ န င သည ဆ ပည တ င က က ယ ခ င န င က သခ င ဖ င လ သ တ က န မ ရ က
မ မ ရ ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ ရ ဆင သည စ က ပ ရ မ မ ရ န င ဆည မ င ဝန က ဌ န လက အ က ရ တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ သည ခ န စ တ င ရန က န တက ကသ လ
ခ ဆ ရ အင ဂလ ပ Chaysay သည မန တလ တ င ဒ သက မ င ခ ခရ င မ င ခ မ နယ ခ ဆ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
ကန ဆ ရ အင ဂလ ပ Kanhsay သည ရ မ ပ ည နယ မ က ဝ က ယ ပ င အ ပ ခ ပ ခ င ရတ င ဟ ပန ခရ င မ င မ မ နယ ကန ဆ က ရ အ ပ စ တည ရ သည
ပန ဆ မန စပ ရ အင ဂလ ပ Panghsay Mansat သည ရ မ ပ ည နယ မ က မ ဆယ ခရ င နမ ခမ မ နယ ပန ဆ မန စပ က ရ အ ပ စ တည ရ သည
ပန ဆ ပတ မ ရ အင ဂလ ပ Panghsay Patmar သည ရ မ ပ ည နယ မ က မ ဆယ ခရ င နမ ခမ မ နယ ပန ဆ မန စပ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
န ပ ဆ တ ရ အင ဂလ ပ Nipasaytaw သည မက တ င ဒ သက ပခ က က ခရ င ရ စက မ နယ န ပ ဆ တ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
ဆ ခင က ရ အင ဂလ ပ Saykhingyi သည မန တလ တ င ဒ သက မ င ခ ခရ င န ထ က မ နယ ဆ ခင က က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
ဆ မင တ ရ အင ဂလ ပ Saymintaw သည မက တ င ဒ သက ဂန ဂ ခရ င ထ လင မ နယ ဆ မင တ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
ဆ ခင ခ ရ အင ဂလ ပ Saykhinkhon သည စစ က င တ င ဒ သက က လင ခရ င ဝန သ မ နယ ဆ ခင ခ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
ဆ အ ဘ ရ အင ဂလ ပ Sayoebo သည မန တလ တ င ဒ သက မန တလ ခရ င အမရပ ရမ နယ ဆ အ ဘ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
အ င မ င ခ သည တ င ရင ဆ ပည သ ဘ သ စ မ ပ က ခ န စ တ င ဖ ဆ အ င မ င သည အန က တ င ဆ ပည M.B.B.S. ဘ က ရန က န ဆ တက ကသ လ မ
ဆ တလ ရ အင ဂလ ပ Saytalone သည မန တလ တ င ဒ သက ပ င ဦ လ င ခရ င ပ င ဦ လ င မ နယ ဆ တလ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
မ ဆ ရ အင ဂလ ပ Muhsay သည ရ မ ပ ည နယ အရ က င တ ခရ င က င တ မ နယ တ လ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
ပန ဆ ရ အင ဂလ ပ Panghsay သည ရ မ ပ ည နယ မ က က က မ ခရ င သ ပ မ နယ မ င ခ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည
လ မ ဆ ရ အင ဂလ ပ Lumhsay သည ရ မ ပ ည နယ အရ က င တ ခရ င က င တ မ နယ မ င ပတ အ က က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
တမ ဆ ကန ရ အင ဂလ ပ Tamasaykan သည စစ က င တ င ဒ သက စစ က င ခရ င မ င မ နယ တမ ဆ ကန က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
ပန ဆ ရ အင ဂလ ပ Panghsay သည ရ မ ပ ည နယ မ က မ ဆယ ခရ င က တ ခ င မ နယ က လ င က န ဆ က ရ အ ပ စ တည ရ သည ရ န ရ က တ မ
ဆေး, ဆေးများ. ဆေး,